Bit mgbako - tọghata bit, byte, kilobit, kilobyte, megabit, megabyte, gigabit, gigabyte na ndị ọzọ ...
Mee tọghatara n'etiti ibe n'ibe, bytes, kilobits, kilobytes, megabits, megabytes, gigabits, gigabytes, terabits, terabytes, petabits, petabytes, exabits, exabytes, zettabits, zettabytes, yottabits, yottabytes
Udi bit - b Byte - B Kilobit - Kb Kilobyte - KB Megabit - Mb Megabyte - MB Gigabit - Gb Gigabyte - GB Terabit - Tb Terabyte - TB Petabit - Pb Petabyte - PB Exabit - Eb Exabyte - EB Zettabit - Zb Zettabyte - ZB Yottabit - Yb Yottabyte - YB
Bandwit (Kilo = 1000 bits)
Aufzeichnungen:The uru nke K (kilo) n'oge mgbawa nwere ike iri abụọ na ụkpụrụ 1024 ma ọ bụ 1000, na-adabere nke ụdị ngụkọta oge ị chọrọ ịrụ. Tụlee iji K = 1024 mgbe ị na-atụle nchekwa ikike ma diski ike, DVD, flash draịva ma ọ bụ ngwaọrụ ndị ọzọ na nchekwa media. K = 1000 ga-eji mgbe ị na-eche echiche nke throughput, ntụgharị na-agba na nke ọmụma na-agafere.
Edeturu: Ọ bụrụ na kọmputa gị nwere 1 KB nke disk ohere bụ na-ekwu na o nwere 1024 B nke uwa, ugbu a, ndị throughput nke netwọk gị kaadị bụ 1 KB/s mgbe ahụ, ọ na-kwuru na ọ Site n'ibu data 1000 B/s.
Ojiji: Tinye uru na unit na pịa tọghata, na mgbako ga-eme akakabarede niile nkeji.
"Anyị na-enye mgbako metụtara kọmputa ụwa."